Nahavita Efitrano Fanjakana 3 000 i Nizeria
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bichlamar Catalan Chichewa Chol Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galoà Goun Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Krio Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mingrelian Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Oromo Ourdou Ouzbek Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tarasque Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tojolabal Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Andro manan-tantara tany Nizeria ny asabotsy 1 Martsa 2014. Faly be ireo vahoaka 823 tafavory tao amin’ny Efitrano Fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Benin City. Efa 3 000 mantsy izao ny Efitrano Fanjakana vita tany Nizeria hatramin’ny 1999, noho ilay fandaharana natao hanampiana ny tany mahantra.
Noresahina tamin’ilay fivoriana ny tantaran’ny fanorenana toeram-pivoriana tany Nizeria, hatramin’ny 1920 tany ho any. Tranon’olona sy trano nohofaina aloha no nampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah tany, tamin’ny voalohany. Tamin’ny 1935 tany ho any vao tena nisy trano natokana hivoriana, ka tany Ilesa no nisy an’ilay izy. Nitombo be anefa ny isan’ny fiangonana tamin’ny 1938 ka hatramin’ny 1990, satria 14 dia lasa 2 681. Sarotra tamin’ny ankamaroan’izy ireo àry ny nitady toerana nivoriana. Nisy mihitsy aza fiangonana enina nampiasa Efitrano Fanjakana iray. Tany amin’ny efitrano sasany indray be loatra ny mpanatrika, ka nisy nijoro tany ivelany ary avy teo am-baravarankely no nihaino ny fandaharana. Betsaka koa tamin’izany ny fiangonana mbola nivory tany an-tranon’olona sy tany amin’ny trano fianarana.
Nanomboka nampindram-bola avy tamin’ny Tahirim-bola ho An’ny Efitrano Fanjakana ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny 1990, mba hanorenana efitrano. Nanohana ny asa fanorenana koa ny Komitim-paritra Momba ny Fanorenana, ka fiangonana 105 no efa nampiany hanorina sy hanavao ny efitranony hatramin’ny 1997. Nisy efitrano 13 naorina tamin’ny 1997 ka hatramin’ny 1999, ary vita tao anatin’ny 7 ka hatramin’ny 15 andro monja izy ireo.
Nihabetsaka ny efitrano vita, nefa mbola tsy ampy ihany izy ireny satria nitombo be ny Vavolombelon’i Jehovah tany Nizeria. Nieritreritra àry ny biraon’ny sampana tany, tamin’ny Aprily 1998, fa Efitrano Fanjakana 1 114 no mbola ilaina.
Anisan’ny Komitin’ny Sampana any Nizeria i Don Trost. Hoy izy tamin’ilay fivoriana manokana natao tany Benin City: “Tena asa be ilay izy ka nieritreritra izahay hoe izany ve dia ho vita.” Vita ihany anefa ilay izy, satria nanampy an’ireo fiangonana tamin’ny fanorenana ny Ekipa Mpanorina Efitrano Fanjakana, nanomboka tamin’ny 1999. Nisy olona enina ka hatramin’ny valo tao amin’ny ekipa tsirairay. Natao tsotra ny planina ka nahavita nanorina efitrano 17 teo ho eo isam-bolana izy ireo, tao anatin’izay 14 taona izay.
Nankasitraka an’ireo mpanatrika ny Rahalahy Trost noho ny zava-bita hatramin’izay. Nilaza anefa izy avy eo fa betsaka ny asa mbola miandry. Niampy 8 000 mahery mantsy ny Vavolombelon’i Jehovah tany Nizeria tamin’ny 2013. Hoy àry izy: “Mila Efitrano Fanjakana 100 fanampiny isika isan-taona, raha tsy izany tsy haharaka an’ilay fitomboana.” Nahatratra 351 000 ny isan’ny Vavolombelona any Nizeria tamin’ny 2013, ary 5 700 mahery ny fiangonana.
Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no Manao Efitrano Fanjakana?
Nahoana ny trano ivavahanay Vavolombelon’i Jehovah no antsoina hoe Efitrano Fanjakana? Avy aiza ny vola anamboarana azy ireny?
Nahoana ny Toerana Fivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah no Tsy Antsoina hoe Fiangonana?
Inona no nahatonga an’ilay anarana hoe “Efitrano Fanjakana An’ny Vavolombelon’i Jehovah”?
Efitrano Fanjakana ho An’ny Vavolombelona Iray Tapitrisa
Efitrano Fanjakana 1000 ary Tsy Mijanona Hatreo